के गर्दै छन् सीके राउत ? – Butwal 24 News
August 29, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on के गर्दै छन् सीके राउत ?
२०७५ फागुन २४ मा खुला राजनीतिमा आएपछि उनको समूह मधेस राजनीतिको तेस्रो धार बन्न सक्ने आकलन गरिएको थियो । तर पछिल्लो समय राउत खासै चर्चामा छैनन् । राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा पनि उनका क्रिया–प्रतिक्रिया उति सुनिँदैनन् ।साढे दुई वर्ष अगाडि सरकारसँग ११ बुँदे राजनीतिक सहमति गरेका राउतले सिरहाको लहानमा राष्ट्रिय परिषद् बैठक गरेर आफ्नो नेतृत्वमा २०७५ चैत ४ मा जनमत पार्टी गठन गरेका थिए । त्यसअघि उनी स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नाममा राजनीति गर्थे । जनमत पार्टी २०७६ जेठ ६ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ ।
जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले चुनाव नजिकिँदै गरेका पार्टीको आन्तरिक गृहकार्यमा आफूहरू लागेको बताए । ‘अबको ६ महिनापछि स्थानीय चुनावको वातावरण बन्न थाल्छ,’ कान्तिपुरसँग फोनमा महासचिव सिंहले फोनमा भने, ‘त्यसपछि अरू चुनाव पनि हुन्छन् । त्यहीअनुसार संगठनको तयारी भइरहेको छ । प्रत्येक जिल्लाको ग्रासरुट लेभलमा बुथ समिति निर्माण गर्ने अभियानमा केन्द्रित छौं ।’ उनले संगठन शुद्धीकरणसँगै पालिका र वडास्तरमा अधिवेशन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘हामी लक्ष्यबाट विचलित भएका छैनौं,’ उनले भने ।पुराना माग र मुद्दा छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएपछि जनमत पार्टीप्रति युवाको आकर्षण कम भएको टिप्पणीप्रति महासचिव सिंहले असहमति प्रकट गरे । ‘युवाको झुकाव अहिले पनि सीके राउतप्रति नै छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग पढेलेखेका हजारौं युवाको जमात छ । केही मान्छेले दिग्भ्रमित गरेका मात्र हुन् ।’ मधेसमा विकासको राजनीतिक वातावरण युवाले नै तयार गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीसँग विदेशमा पढेर, काम गरेर फर्केका युवा छन् । विदेशमै बसेका पनि छन् । ती युवाको भरोसाको केन्द्र सीके राउत हुन्, जनमत पार्टी हो ।